admin, Author at BIM Trainings
ကျနော်ပြောချင်တာက Networking ဆိုတာ အင်မတန်ကျယ်ပြန့်ပြီးတော့ CCIE နဲ့တင် မရပ်နေဘူးဆိုတာ ပြောချင်တာပါ။ CCIE ကို အစပဲလို့ တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အံ့သြသွားရင် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကအမှန်ပါပဲ။ Networking ဆိုတာ အရမ်းကို ကျယ်ပြန့်လွန်းပြီးတော့ Networking ထဲက အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တောင်မှ အချိန်အများကြီးပေးပြီး လေ့လာနေမှဖြစ်တာပါ။ ကလင်တန်က ပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကလင်တန်က “နားလည်မှု” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုက ပြသနာဖြစ်နေတာပဲလို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ နားလည်ခြင်းဆိုတာ Router တစ်ခုမှာ ဘယ်လို Configure လုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Router တစ်လုံးရဲ့အမြင်ကနေ Technology ရဲ့ အမှန်တကယ်လုပ်နေတဲ့အရာကို နားလည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အားလုံးကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ မြင်စေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Router […]
အခုတလော ကျနော့ကို လာမေးကျတဲ့ မေးခွန်း တစ်ခုက “Professional Network Engineer တစ်ရောက်ဖြစ်ဖို့ Diploma / Degree စတဲ့ Academic Certificate တွေ ရှိဖို့လိုလား” ဆိုတာပါပဲ။ တစ်ချို့ကလည်းပြောကြတယ် “Degree တွေ Certificate တွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ တကယ်တတ်ရင် တကယ်တော်ရင် ဘာမှကြောက်စရာ မလိုဘူး ၊ ကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်” ဆိုပြီးတော့။ ဒါလဲမှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Network Engineer တွေဆိုတာ တစ်ခြား IT Professional တွေဖြစ်တဲ့ Software သမား တွေနဲ့မတူပါဘူး. Bill Gate တို့ Mark Zuckerberg တို့ လည်း ဘွဲ့မရပဲ အောင်မြင်နေတာပဲ ဆိုပြီး နှိုင်းလို့မရပါဘူး။ […]
ဒီနေ့တော့ Network Security အကြောင်းနည်းနည်း ပြောရအောင်။ Network Security လို့ပြောလိုက်ရင် Firewall ၊ VPN ကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ယနေ့ခတ် Nnetwork များကို လုံခြုံအောင်လုပ်ရတာဟာ အရှုပ်ထွေးဆုံးအလုပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Technology တွေနဲ့ Internet ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကြောင့် Network တွေဟာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း တွေအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ Network တွေဟာလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်တုံးကမှနဲ့မတူအောင် ချိတ်ဆက်မိနေပြီး Network တစ်ခုကိုဝင်ရောက် ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ Entry Point နေရာတွေ ဟာလည်း များသထက်များလာပါပြီ။ ဒီလိုမျိုးတိုးတတ်လာတဲ့ Network Technology တွေနဲ့အညီ အဲဒီ Network တွေရဲ့လုံခြုံရေး ကာကွယ်ရတာဟာလဲ တစ်နေ့တခြား ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတော့တယ်။ […]
ဒီနေ့တော့ Datacenter Network အကြောင်းနည်းနည်း ပြောရအောင်. အရင်ဆုံး Datacenter Network ဆိုတာဘာလည်း ၊ ပုံမှန်သုံးနေကျ Network တွေနဲ့ဘာကွာလည်း ကြည့်ရအောင်။ Datacenter Network ဆိုတာ Datacenter ထဲမှာ အသုံးပြူတဲ့ Compute ၊ Application ၊ Storage ၊ Security Node နဲ့ Service Component တွေကို အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Datacenter Network တွေရှိတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက Network Engineer တွေအတွက် Datacenter Network တွေနဲ့သိပ်မရင်းနှီး ခဲ့ပါဘူး။ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ Business တွေက Information Technology […]
OSPF – Part3(Area and LSA)
OSPF Area Overview OSPF ဟာ ဧရိယာအယူဆကို သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် hierarchy and scalability အတွက် အများကြီး ကောင်း မွန်လာပါတယ်။ Distance Vector ဖြစ်တဲ့ RIP ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့် အသစ်အသစ်တွေ တီထွင်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ OSPF အတွက် စနစ်တစ်ကျရှိတဲ့ တည်ဆောက်ပုံနဲ့ Large Network အတွက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့က RIP ရဲ့နေရာမှာ ကောင်းကောင်းနေရာလွှမ်းမိုးနိုင် တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဧရိယာအယူဆကို အသုံးပြုရသလဲ? LSA flooding domain ကိုခွဲခြားချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာ ကြောင့် LSA Flooding Domain ကိုခွဲခြားချင်ရသလဲ? LSA Flooding domain တွေကွဲနေတော့ ဘာအကျိုးရှိ လဲ? ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ […]
Specialization ထက်ပိုရွေ့ ခိုင်မာသည့်အခြေခံကောင်းများ ရယူခြင်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ မိမိနဲ့သင့်တော်လား၊ မသင့်တော်လား မိမိကိုယ်တိုင် စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်သက်စာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ လမ်းရဲ့ အကွေ့အကောက် အဖြောင့်အမတ် စတာတွေကို မလျှောက်လမ်းခင်က သိထားနှင့်လျှင် တကယ်လျှောက်လှမ်းဖို့ သင့်တောာ် မသင့်တော် ပိုမိုမှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုကို တခြားသူရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သော်လည်းကောင်း ရွေးချယ်ပြီးမှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားမှု ကျဆင်းပြီး အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်၊ ပျော်ရွှင်သင့်သလောက် မပျော်ရွှင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းခုလတ်ရောက်မှ နောက်ပြန်ဆုတ်တာတွေကြောင့် ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ စတာတွေအတွက်ပါ နှမြောဖို့ ကောင်းပါတယ်။ IT ပညာရပ်ဆိုတာကလည်း ပြောရင်သာလွယ်တာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်တဲ့အခါ ရွေးစရာတော်တော်များပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရရင်. Network Engineer လုပ်ချင်တာလား? System […]
IT လုပ်ငန်းမှ Paper Certified Engineer များ
Scroll down for Unicode Version အရင် Blog Post မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း Certification များဟာ IT လုပ်ငန်းမှာ အလွန်ပင်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမသိရင်နေပါစေ Certificate တော့ရအောင်ယူလိုက်အုံးမယ် ဆိုသူတွေများလာပါတယ်။ ထိုသူများကို Paper Certified Engineer များဟု IT လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခေါ်ကြသည်။ အချို့သော လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ များကလည်း Business ကိုသာနားလည်ပြီး Technical ပိုင်းတွင်မကျွမ်းကျင်သောကြောင့် ထိုသူများကို အားကိုးတကြီးဖြင့် အခြားသူများထက် လစာပိုပေးကာ အလုပ်ခန့်တတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်ခန့်ပြီးကာမှ ပြဿနာ မျိုးစုံနှင့် ကြုံတွေ့ရပါတော့သည်။ Paper Certified Engineer များသည် မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်မှု နည်းတတ်ကျပါတယ်။ Technical […]
“IT Certification” အရေးကြီးသလား?
Scroll down for Unicode Version. “Certificate တွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ တကယ်တတ်ရင် တကယ်တော်ရင် ဘာမှကြောက်စရာ မလိုပါဘူး” အပေါ်က စကားမျိုးကို အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား IT Professional တရောက်ဆီကနေ ကြားဖူးပါသလား? ဒါလဲမှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ်ကအဆက်အသွယ် မကောင်းရင်၊ ကိုယ့်ကိုသိတဲ့လူမရှိရင် Agency တွေ HR တွေကို ကျော်ဖို့တောင်မလွယ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Company တစ်ခုက Vacancy တစ်ခု ကြော်ငြာလိုက်ပြီဆိုရင် လာလျှောတ်တဲ့သူ ရာဂဏန်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို တစ်ခုချင်း စီစစ်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ Agency တွေ HR တွေက သတ်မှတ်ရလွယ်ကူတဲ့ စံနှုန်းတွေ သုံးလာပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပညာရေး ၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေ အပြင် ၊ […]
ခေတ်သစ် Network Engineer များနှင့် ဖြတ်လမ်း
Scroll down for Unicode Version. “A lot of people who are proficient in other IT specialties think they can configure the routers withalittle help of good uncle Google and free support from fellow bloggers” – Ivan Pepelnjak အရင်ဆုံး Ivan Pepelnjak ဆိုတာ ဘယ်သူလဲပြောပြချင်ပါတယ်။ Network လောကမှာ အလွန်ကို နာမည်ကြီးတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ Network သမားတွေသာမဟုတ်ပဲ တခြား IT Infrastructure Professional […]
Networking Field မှာ အလုပ် ရှာရာတွင်
Scroll down for Unicode Version. အလုပ်ရှာမယ် ဆိုလို့ Resume ဘယ်လိုရေးရမယ် ၊ Interview အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင် ရမယ်ဆိုတာတွေ ပြောမလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် မေ့နေတာတွေ ၊ သတိမထားမိတာ လေးတွေပြောချင်လို့ပါ။ “သင်ရောက်ရှိလိုသော အလုပ်နေရာ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာပါ” ဥပမာ ISP Network Engineer တစ်ရောက် ဖြစ်လိုသည် ဆိုပါစို့။ အလွယ်ကူဆုံးကတော့ လက်ရှိ ISP မှာအလုပ်လုပ်နေသူကို မေးမြန်းပြီး ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ISP မှာလည်း ကိုယ်သိတဲ့သူ မရှိဘူးဆိုရင် နောက်တမျိုးကတော့ အလုပ်ကြော်ညာတွေကိုကြည့် ၊ ဘယ်လို Skill Set မျိုး၊ ဘယ်လို Exeprience မျိုး ၊ ဘယ်လို Education မျိုးလိုအပ်သလဲ လေ့လာပြီး ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ […]